X the လိုင်း ;-) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » X the လိုင်း ;-)	18
X the လိုင်း ;-)
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 16, 2015 in Critic | 18 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ပါတ်လောက် က အလုပ် ထဲမှာ ရခဲ့တဲ့ အီးမေး အကြောင်းလေးပါ။
လက်ရှိအလုပ်က ချာရတီ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ရဲ့ Bookkeeper ခေါ်ခေါ်၊ စာရင်းကိုင် ခေါ်ခေါ် ဆိုပါတော့။
တာဝန်ယူရတာ တွေထဲ မှာ ဘော့စ် ကို Supplier ကို Payment လုပ်ဖို့အတွက် စာရင်း ပြင်ပေးရတာလဲ ပါပါတယ်။
Supplier တွေထဲ က တစ်ယောက် ကို ဟိုးအရင်လ တုန်းက ပိုက်ဆံ နှစ်ခါ ထပ်ပေးမိခဲ့တယ်။
အဲဒီအကြောင်း ကို အဲဒီ Supplier ဆီ email ပို့ ခဲ့တယ်။ Refund လုပ်ပေးဖို့။
ဒါကို သူက စာရင်းမှတ်ထားမယ်ပြောပြီး Refund မလုပ်ပေးဘူး။
အခု New Bill ရောက်လာတော့ လဲ နှုတ်ပေး မထားဘူး။
ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို Credit Note လုပ်ပြီး သူ့ Bill Amount ထက် လျှော့ပေးခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ အကျိုးအကြောင်း ကို သူ့ ဆီကိုလဲ အီးမေး ပို့လိုက်တယ်။
သူ့ဆီကလဲ ဘာမှ ပြန်ပြောမလာဘူး။
ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းပြီးပြီ ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ပါတ် က အဲဒါ ကို Outstanding ဆိုပြီးတောင်းလာပြန်တယ်။
ဒီတော့ အရင် သူ့ကို ပို့ခဲ့ ရှင်းတမ်း ကို Forward လုပ်ပြီး ပြတော့ သူဆီက အီးမေး ပြန်ရောက်လာတယ်။
Thanks. But I think crossed the line.
ကိုယ့်မှာ နဲနဲတော့ အီ သွားတယ်။
သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ကိုယ်က သူ့စည်းကို ကျော်တာ ဟုတ်မှာပါ။
ကိုယ့်ဘက် ကတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်း ဘက် က ကြည့် ရမှာ ကိုယ့်တာဝန်ဘဲ။
မဟုတ်တာ ကို လိမ်ပြီး ကစားထားတာမှ မဟုတ်တာ။
သင်ခန်းစာ တစ်ခု တော့ ရလိုက်တာပေါ့။
.နောက်တစ်ခါဖြစ်ရင်တော့ Supplier ဆီ ကို email တင်မက Credit note (သူ့ဘက်ကတော့ Debit Note ပေါ့) ကို ပါ ပို့လိုက်ဖို့ ကိုပါ။
(အိုင်တီ Admin လုပ်တုန်းက စက်တွေ နဲ့ ဆက်ဆံရတာ Crossed the line လို့ ဘယ်တော့ မှ မပြောရှာဘူး။) တကယ်တော့ အရှေ့မှာပြောတာက နိဒါန်း ချီလာတာ လို့ ပြောချင်တယ်။
ဒီအတိုင်း မြုံ ထားရင် အစာမကျေ အိပ်မပျော် အထိ ဖြစ်တော့မှာမို့ အံချပါရစေ။
Cross the line ဖြစ်ခဲ့ ရင် ခွင့်လွှတ်ကြဖို့။ …
မနေ့ က ထူးအိမ်သင် က အစ မောင်အောင် ရဲ့ ကင်မရာ အလယ် ဇာတ်လမ်းပေါ့။
အဲဒီ အတွက် မောင်ဂီ ရဲ့ ပို့စ် “အိမ်သုံး compact digital camera ကို ဘယ်လို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူမလဲ(၃) Personal Advice” ကို ရှာတွေ့လိုက်တယ်။
အဲဒီမှာ သူကြီး ရဲ့ မှတ်ချက် ကို ဖတ်လိုက်မိတယ်။
ဒီစာကို.. မန္တလေးဂေဇက်သတင်းစာထဲ သုံးချင်ပါတယ်..။
.နိုင်ငံခြားနေသူဖြစ်တာမို့.. စာမူခမရပေမဲ့ ပွိုင့်တော့ ၅၀၀၀ တိုးပေးထားပါမယ်..။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်..
၁) စာလုံးအဖြတ်အတောက်နဲ့ စာလုံးပေါင်းတွေပြန်စစ်ပေးပါ..။
၂) ရွာသားနာမယ်တွေညွှန်းထားတာ.. ဖြုတ်ပေးပါ..။
၃) ဒေါ်လာ ၂၀၀ကနေ ၅၀၀ကြားမှာ.. ကိုရင်ကစိတ်ကြိုက်ရွေးတဲ့.. ကင်မရာမိုဒယ် ၅ခု ချပြပေးပါခင်ဗျား.။
၄) စာမူကို.. editor@mandalaygazette.com ဆီ တိုက်ရိုက်ပို့ပေးစေလိုပါတယ်..။
(အဲဒီမှာ မောင်ဂီ ကတော့ ကြိုက်သလို သုံးပါ လို့ သဘောထားကြီး ထားပါတယ်)
သူကြီး ရဲ့ ရွာ ထဲက ပွိုင့်ပေးစနစ် မှာ နိုင်ငံခြား က ရေးသူ တွေကို ပွိုင့်ပေး လဲ ငွေ နဲ့ ဖလှယ် မပေးဘူး။
သဘောကတော့ ဒီ ပွိုင့် က အလကားတန်ဖိုးမဲ့ အပျော် မြင်ဖို့ ပေါ့။
ကျွန်မတို့ ပြင်ပ လူ များကလဲ ဒီ စည်းမျဉ်း ကို ကျေကျေနပ်နပ် ကြီး ကို 101% လက်ခံ ပါတယ်။
အခု မြင်လိုက်ရတဲ့ မှတ်ချက် မှာတော့ ” ရွာထဲ က စာ ” ကို “Business သတင်းစာ” မှာ သုံး မယ်။
ဒါပေမဲ့ ပွိုင့် ဘဲပေးမယ်။
. ပြသနာက အဲဒီလူက နိုင်ငံခြား က လူ ဖြစ်လို့ အဲဒီပွိုင့် ကလဲ ဘာမှ သုံးလို့ မရတဲ့ တန်ဖိုး မဲ့ အလကား ပွိုင့်။
.မောင်ဂီ ပို့စ် တွေထဲ အလကား ပွိုင့် ၅၀၀၀ တိုးပြီး ဘယ်နှစ်ပုဒ် သုံးထားခဲ့လဲ။ သူပို့စ် တွေ ကို သတင်းစာထဲ အလကားပုံစံ နဲ့ သုံးထားတဲ့ သဘောလို့ မြင်လိုက်မိလို့ပါ။
တကယ်တော့ အဲဒါတွေ က သတင်းစာသုံး မို့ ဘယ်မှာ နေတဲ့ သူ ဖြစ်ဖြစ် ငွေ ဘဲ မပေးသင့်ဘူးလား။
ဒါတွေ ကတော့ ရွာ နဲ့ သတင်းစာ ကြား လိုင်းကျော် သုံး နေတာလို့ မြင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ကို Crossed the Line ဆိုလဲ Crossed the Line ပေါ့ သူကြီး ရယ်။
အတည် နောက်တာပါ။ :-))))))))
nozomi says: သူကြီးကို အဲဒါမျိုး ပြောမှရမှာ ဘာစည်းမှ မကျော်ဘူး ပြောသာပြော ချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပါပေါ့ အရီးရယ်
ကိုဂီ လဲ (သူကြီးရဲ့) အဲဒီပွိုင့်တွေရမလားလို့ ဟိုက အလုပ်တွေနားပြီး ဒီကိုပြန်လာတယ်ကြာမိတာပဲ
အခုထိတော့ ပွိုင့်ရကြောင်းမကြားသေး ဟေ ဟေ့
မြစပဲရိုး says: . အော့ကျောလန် အစ်မကို အားပေးတယ်လား ကိုနို။
သူကြီး ပြသနာရှာ ရင် ရှင်လဲ တစ်ဝက် ပါတယ်။
. ပြောချင်တာ ဟိုနေ့က သူကြီး ရဲ့ ကွန်ဂရက် က မှတ်ချက် ကို ဖတ်ပြီး ကထဲ က။
အဲဒီတုန်းက ဒီ X the လိုင်း က နားထဲ ဝင်နေ စမို့ ပါးစပ်ပိတ်ထားတာ။
အခု မှတ်ချက် ကို ထပ်ဆင့် မြင်လိုက်တော့ ပိတ်နေလို့ မရတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ X the လိုင်း လုပ်လိုက်တာ။
. ပြောရရင် မောင်ဂီ ပွိုင့် တစ်သိန်းပြည့် လိုက်တာက မြန်မာပြည် က ရေးသူ အနေ နဲ့ ပြည့်ခဲ့တာမို့ အခု သူ့ ကေ့စ် ကတော့ မြန်မာပြည် က လူ ပြည့် သလို ပေးသင့်တယ်။
. နောက်ကျရင်သာ မောင်ဂီ ရဲ့ ကေ့စ် ကို နမူနာယူပြီး သူကြီး ရဲ့ စနစ် ကို စည်းမျဉ်း အဲလို ကေ့စ် အတွက် ထပ်တိုး ချင်တိုးပါ။
. နောက်ပြီး ဒီကလေး ရေး တဲ့ စာတွေ က တကဲ့ ဗဟုသုတအိုး စာတွေရော ဟာသပါ ဘက်စုံ ၁၂မျိုး ဂျင်းသုပ် ရတဲ့ စာတွေပါ။
ရွာထဲ မယ် သူလို လူတစ်ယောက် ရှိတာ ကိုလဲ သူကြီးမင်း အပါအဝင် ကျွန်မတို့ တွေ ဂုဏ်ယူသင့်တာ မို့ သူ့ ကို လဲ မြန်မာပြည် က လူများ ပွိုင့်ပြည့် သလို ဘောင်ထဲ ထည့်လိုက်သင့်ပါတယ်။
. အော့ကျောလန် အစ်မကို ထောက်ခံတုန်းဘဲလားကိုနို။
Ma Ma says: ဆရာတစ်ယောက်က ပြောတာ သတိရလို့ ပြန်ပြောပြရအုံးမယ်။
လူတစ်ယောက်ကို သိန်း၅၀၀ ပေးမယ်၊ ရပြီးရင် အိပ်ပဲနေရမယ်၊ နိုးလာရင် ပြန်သိမ်းမယ်လို့ ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ။ Crosset the line ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သဘောကျလို့ မှတ်သွားပြီ။
မြစပဲရိုး says: Cross the line Idiom က to do something wrong (ဒါမှမဟုတ်) behaving inaway that is not socially acceptable တဲ့။ lol:-)))
ဦးကြောင်ကြီး says: ကိုယ့်ဖက်က ပိုပေးမိတာ ကိုယ့်အမှားမို့ ကိုယ့်ဖာသာ ခွက်ဒစ်နုတ် လှုပ်ခွင့်မရှိ။ အနော်သာစို ပိုပေးငွေ ချက်နံဗါတ်၊ နေ့ဇွဲ ရည်ညွှန်းဂျက်ပေးပီး ဘီလ်ကို လျော့ ပေးမည်။ မိမိက ပေးရသူ ဟိုဖက်က ရောင်းသူပဲဟာ ကြောက်ဆရာ မလို။ သူ့ဖက်တွင်လည်း အကြောင်းပြချက် ရှိနိုင်သီ။ ကပ်စတန်မာဆိုလျင်သာ အလှုပ်ရခက်သီ။ ဆပ်ပလိုင်းရာကတော့မှုဆရာမလို။ အနော့်သာ လာလှုပ်ကြည့် … လော်ဘီသော အန်အယ်လ်ဒီသော ဂုမစိုက်… တယားရုံး တက်တိုင်မည်။ ထောင်ခြပစ်မည်။
မှောင်ဂီက ပြည်ဒွင်းရောက်နေပြီမို့ မာမွတ်ခိုမ် ပွိုင့်နဲ့ပိုက်ခြံ လှဲခွင့်ပြုနိုင်ပြီထင်သည်။ မှောင်ဂီ (ခ) နူးဘာဂီ (ခ) ပက်ကညောဂီ ၏အကောင့်ဖက်မှ ပြည်ဒွင်းနေထိုင်ကြောင်း သပ်သေပြနိုင်ရမည်။ သို့မှသာ လာလတ္တံ့သော နေရပ်လိပ်စာ ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ကျနော်ပြည်ဒွင်းမှ နေပါသီ စိုယုန်ဖြင့်မြ… ဤဂါး ဂေဇက်ရွာသဂျီးရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြောင်ကြီး အလိုတီး….။
မြစပဲရိုး says: ရေး
. ရွှေကြောင်လေးပါ ဗုတ် လုပ်ပေးပြီ ဟေ့။
စိမ်း ပေးတယ် ကြောင်ကြောင်။
နှစ်ခါ ပိုပေးမိတာ ကိုယ် မှားတာ ဝန်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့လဲ တစ်ဝက်မှားတာ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပုံမှန် Direct Debit နဲ့ ပေးနေတဲ့ Expense ကို Invoice တစ်ခု နဲ့ လဲ လှမ်းတောင်းခဲ့တော့ ရိုးရိုး Bill မှတ်ပြီး ပေးလိုက်မိတာ။
နောက်သူတို့ က Direct Debit နဲ့ ဘဏ်စာရင်းက အော်တိုနှုပ်ပြန်ရော။
စာရင်းကိုင် အပြောင်းအလဲ ကာလ မျိုး တွေမှာတော့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောပါ။
သူတို့ကြည့်ရတာ နဲနဲ စာရင်းရှုပ်ရင်ကို မလုပ်တတ်ဘူးလားမသိ။
တို့များ မြန်မာ ထိုးထွင်းဉာဏ်လို ဟိုပြောင်းဒီလှည့် မလုပ်တတ်ကြဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ကဘဲ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ :-)))
ဦးကြောင်ကြီး says: အိမ်ယှဉ်အိန်ငါး ပြသနာ မြင်းကျီးဗျာ အမ်တီလော်ဗီမြ…။ အိမ်ယှဉ်ဂ မွမ်းမာန်ထိန်းသိမ်း လှုပ်မပေးလို့ အိမ်ငှားဂ မပေး လှုပ်လို့မြ။ အဲလိုဗဲ သူ့စမှားလို့ ငါးပျံမှားတယ် မစိုင်ဖူး။ သူစထိုးလို့ ကိုယ်ပျံထိုးရင် နှာယောက်စာလုံး ဂတ်ထဲရောက်တာပဲ။ ဂုပြသနှာက ကိုယ့်မှာအခွင့်မယှိဘဲ သုပိုင်နှပ် ကြူးကျော်မိဒါ။ နိုင်ငံဒေါ်ပုဏ်ကံမှုနီးဗါး အပြစ်ကျီးသယ်။ အနော်သာစို နှာခါတောင်းသမို့ direct debit အကောင့် ရပ်လိုက်ရမလား မေးမည်။ သူတို့အမှား ပျံဝံခံခိုင်းဒဲ့ သဗောပေါ့။ အိုကေဆိုလို့ကဒေါ့ ချက်ပရင့်ထုတ် လာဘ်ထဲကိုင်ထား ပညာပြလှိုက်မှာ…။
ပုဏ် ဦးကြောင်ကြီး – ဂေဇက်ရွာဗံဒါသီးဝံကျီး
မြစပဲရိုး says: Accouting Software ထဲ မှာ Credit Note နဲ့ ဘဲ သွားလို့ ရတာ ကြောင်ကြောင် ရဲ့။
Bill (Invoice) က Amount ကို လျှော့ လို့ Audit စာ မိ သွားမှာပေါ့။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကိုယ့်ဖက်က နှာခါ ပေးမိထားတာ၊ လဆင်ဘဏ်ရှင်းဓါန်းမှာလဲ မြင်နေရဒါ ဘာပူဆြာလိုလဲဂျ။ သူတို့ ပိုက်ချံလျော့ ရဒဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဆိုဒါ reference မြင်ဒဲ့အခါ တွေ့လိပ်မပေါ့။ အဲဒီကြ ခွက်ဒစ်နုတ် ပို့လိပ်မဲ။ အဲဒိကြ လာဘ်ကြံဘီလ်ငွေကို အဲဒီခွက်ဒစ်နဲ့ ရှင်းထုတ်လှိုက်ပေါ့။ နှစ်အကုန် စာရင်းပိတ်ရက် မှုတ်ရင် ပြသနှာရှိပါဘူး..။။
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်။ မှတ်ထားပါပြီ။ :-)))
ဒါထက် နီ က အင်ဒုံနီယာ မဟုတ်လား။ ဒါတွေလဲ တတ်တယ်လား။ Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: အနော်က ဂေါင်း…..
မြစပဲရိုး says: အမှန်တော့ ကိုယ့်ဘက်က နဲနဲ လောသွား မိတာ အမှားပါ။
learn from the mistakes ပေါ့။ အရှုံး တော့ မရှိပါဘူး။ :-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ညင်းညင်းညင်းးးး
စာရင်းကိုင်တွေ လိုင်းတွေ ခရော့(စ) လာတာ ကို စိတ်နာနေသူရှေ့မှာ လာပြေါတာလားး
ကိုယ့်ရုံးကစာရင်းကိုင်နဲ့တောင် မကျေလည်တာ အကြိမ်ကြိမ်။
ပရော့ဂျက်မန်နေ့မန့်က ရှင်းတတ်တဲ့ ငွေကြေးပုံစံနဲ့ စာရင်းကိုင်က ရှင်းတတ်တဲ့ ငွေကြေးပုံစံ မတူလို့ပါတဲ့။
ကိုယ်တွေကတော့ လိုတာပိုတာ ဆိုက်ထဲမှာ အလုပ်ကို တိုးခိုင်းလိုက် လျှော့ခိုင်းလိုက် လုပ်ပြီး ပီအို ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
မောင်ဂီ ရီပလိုင်းတာ ယဉ်ကျေးနေလို့ ရွာပါးမဝသေးတဲ့ အချိန်ထင်ရဲ့လို့ တောင် တွေးလိုက်မိသေးးး
သူ့ ဆဲစာတောင် စတစ်ကီပေးတဲ့ လူဂျီးးးးး
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ပို့စ်ကို ပြန်သွားဖတ်မိတယ်။ စာမူတစ်ပုဒ်ကို နိုင်ငံခြားသူမို့ ပွိုင့် 5000 ပေါ့နော်။ ရွာထဲမှာ ပွုင့် 5000 ဆိုတာ ကျပ်ငွေ ငါးထောင်နဲ့ ညီမျှတယ်လို့ ထင်မိတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ စာမူတစ်ပုဒ် အနည်းဆုံး ၁၀၀၀၀ကျပ် ရပါသတဲ့။ ခိခိ ပြောကြည့်တာပါ။ ပြောကြည့်တာ။
kai says: ဂီဂီကို တလောကတင်.. ပွိုင်၁သိန်း၂သောင်းကျော်ကို.. ၅သောင်းနှုတ်ပလိုက်တာ.. အခုမြင်ရတဲ့ပွိုင့်ဖြစ်နေတာပဲ..။
အခုပွိုင့် ၁သိန်းပြည့်ရင်.. ကျပ်၁သိန်းဖြစ်ပါလိမ့်…။
လောလောဆယ်.. အရီးလတ် ၁သိန်းကျော်ပစေဦး..။
အခုလိုလှူရသောအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်… ရောက်လာတဲ့ဘီလ်တိုင်း… ငွေ၂ခါပြန်ပေးနိုင်လောက်အောင်.. ချမ်းသာသူဖြစ်စေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: . နောက်ဘဝ ထပ်ပြီး ရေစက်ဆုံ နေမစိုး လို့ သူကြီး ကို တော့ အလှူ မထည့်ပါရစေနဲ့တော့။
ကိုယ့် ကိစ္စ ကိုယ့်ဟာကိုသာ တရားမျှတ အောင် ရှင်းပါ။
We need justice and fairness!
မြစပဲရိုး says: ဒီတစ်ခါ တော့ ထိပ်တန်း ၁၀ ယောက်ထဲ က တစ်သိန်းပြည့် ပြီး သူ တွေ ထုတ် တာ “၃ ယောက် ” လို့ ဖြစ်အောင် မှတ်တမ်းတင်ပေးပါ။
. မောင်ဂီ ရဲ့ ဂျပန်တုန်းက ပွိုင့် တွေ ပြန်ပေါင်းထည့်ပေးပါ သူကြီးရယ်။
ရွာထဲ မှာ မာမားရယ်၊ မာမီ ရယ် ဆားလေးရယ် ၃ ယောက်တူတူ ပေါင်းပြီး ပန်းဝင်တဲ့ သမိုင်း တစ်ခု ကျန် တာပေါ့။ :-))))
Mike says: .ဘာဘာ ဘာမှမပြောတတ်ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.